Dixie Orange County တွင်ဟိုတယ် - ဒစ္စနေးကယ်လီဖိုးနီးယားဟိုတယ်
ကောင်းပြီ။ အိုင်တီလုပျဆောငျ SO ကောငျးစှာ
မှုအရာတို့ကို။ ပြောပြဖို့ Story ဖူး
သိအောင်ပြပါဖို့ Stuff မဟုတ်ပါ။
ရယ်သံများ timeless IS, စိတ်ကူးစိတ်သန်း NO အသက်ရှိပါတယ်
AND အိပ်မက် FOREVER ဖြစ်ကြပါတယ်။
AND ငါဘာ ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်
တစ်ခုသာသင်ရေကူး Away နေ
& nbspFROM ကောငျးစိတ်ဓါတ်များ
Dixie Orange County ထက်ဝက်စျေးနှုန်း Disneyland နှင့်အခြားလူကြိုက်များဆွဲဆောင်မှုတစ်ခု 15 မိုင်ပတ်လည်အတွင်းနေထိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးသောအရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ တစ်ဦး 5-ကြယ်ပွင့်ဘတ်ဂျက်အပေါ်တစ်ဦး 3-ကြယ်ပွင့်အတွေ့အကြုံကပျော်မွေ့လာကြ။ သင်ကနောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့အပေါ်2တစ်ပါတီ, ဒါမှမဟုတ်အဆုံးစွန်ဒစ္စနေးအားလပ်ရက်အပေါ်5တစ်မိသားစုများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအခန်းထဲမှာရှိသည်။ အကောင်းဆုံးသင်နှင့်သင့်နယ်လှည့်အလိုဆန္ဒများတာဝန်ထမ်းဆောင်သောငါတို့အသစ်ပြန်ပြုပြင်အစုံမဆိုရွေးချယ်ပါ။
ကဘယ်မှာသင့်ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီစဉ်, ညစာစားဘို့သွားကြဖို့အကြံပြု, ဒါမှမဟုတ်ပဲအပြုံးဖြင့်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်မယ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 24 နာရီရှေ့စားပွဲခုံန်ထမ်းတတ်နိုင်သလောက်သင်တို့၏နေထိုင်အဖြစ်လွယ်ကူပြီးပျော်စရာလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
အဆိုပါ Dixie အမှတ်တံဆိပ်အဘယ်သူ၏ဘဝတစ်မူးကားမောင်းသူအားဖြင့်အများကြီးလည်းမကြာမီအတိုဖြတ်ခဲ့တတိယ, Dixie မှညီအစ်မနှစ်ယောက်ကတစ်ဦးခှနျဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအပြုသဘောသို့အနုတ်ဖွင့်ဖို့လိုက်ရှာ, နှစ်ခုကျန်ရစ်သူအစ်မတွေ Dixie သူ ... နှိမ့်ချ classy, ​​အနုပညာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတိပြုမိ, စာနာမှု, ဣနြေ္ဒနှင့်ဒါအများကြီးပို၏အနှစ်သာရကိုသည့်သူမ၏နာမ၌ဟိုတယ်ဖန်တီးခဲ့သည်။
အခန်းပေါင်း & Suites
ရေကူးရေကူးကန် access ကို
အလုပ်အမှုဆောင်ရှငျဘုရငျ - $ 59.00 ထံမှနှုန်း / တညဉျ့
နှစ်ချက်ဘုရင်မ - $ 69.00 ထံမှနှုန်း / တညဉျ့
Dixie Orange County တွင်ထိပ်တန်းရှာမည်
အဆောက်အဦ & န်ဆောင်မှုများ
ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင် HDTV w / Cable ကို
ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကို Access ကို
ကို Safe Deposit Box ကို (ရှေ့စားပွဲခုံ)
ရေခဲသေတ္တာ & မိုက်ခရိုဝေ့
ရရှိနိုင် Tours မှ
Dixie Orange County တွင်ထိပ်တန်း
အထူးများ & ကမ်းလှမ်းချက်များ
သင်ရုံအဖြစ်တာသငျသညျခရီးမှကိုချစ်အဖြစ်အခွင့်အရေးကိုချစ်သလား? ကောင်းပြီပြီးတော့, မရှိထပ်မံကြည့်ရှု! 15% အထိများ၏လျှော့နှုန်းများခံစားကြည့်ပါ - သင့်အခန်း booking သောအခါမြှင့်တင်ရေး code ကို MEMBER15 ကိုသုံး ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအခန်းပေါင်းနှင့်အစုံပယ်ဤနေရာတွင် Dixie Orange County မှာဤအကို select လုပ်ပါကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အတူ:
အလျှော့စျေးလက်ခံရရှိရန် check-in အပျေါ၌လိုအပ်သောတစ်ဦးကခိုင်လုံသော ID နှင့်အဖွဲ့ဝင်ကဒ်။ ကန့်သတ်ရရှိနိုင်။
% 10 Save
Dixie Orange County သင်နှင့်သင့်မိသားစုအခါသင်သင်အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေသောတူညီစှာသောနှုန်းထားများအရသေချာစေရန်လိုလား ငါတို့အားဖြင့်တိုက်ရိုက်စာအုပ်ဆိုင်နှင့် 10% သိမ်းဆည်းပါ။ တိုက်ရိုက် booking အဆင်ပြေလွယ်ကူသည်နှင့်ရှိပါတယ် အဘယ်သူမျှမကအခြား hidden အခကြေးငွေ တတိယပါတီဆိုဒ်များအားဖြင့်လိုအပ်သည်။ အောက်ကခလုတ်ကိုဖွင့် click နဲ့ 10% Save!
သာအွန်လိုင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်သက်တမ်းရှိ။ သင့်ရဲ့ကြိုတင်မှာယူမှုချတဲ့အခါမြှင့်တင်ရေး code ကို DIRECT10 ကိုသုံးပါ။
ယခုနှစ်တခု Make အပိုရင်ခုန်စရာ သင့်ရဲ့အထူးတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတဦးတည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်ဆိုင် ရိုမန်းတစ်ထွက်ပြေးဖို့ပက်ကေ့။ မတ်လတစ်ခုလုံးကိုလမရှိနိုင်ပါ။ မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနွေးထွေးအသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရှငျဘုရငျ Suites တရှမ်ပိန်, ချောကလက်နှင့်အိပ်ရာအတွက်နံနက်စာခံစားကြည့်ပါ Dixie Orange County ။ နှုန်းထားများ $ 99 / ညအချိန်တွင်စတင် နှင့်ပါဝင်:
-Cozy ရှငျဘုရငျ Suite2ဘို့ဿုံမထိုက်မတန်
ရှန်ပိန်၏ -a Bottle သ
(သင့်ရွေးချယ်မှု 1 နံနက်)
"ဂီတစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုတက်ရောက်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်အပေါ်ခဲ့နှင့်တက်ကိုချိုးဖျက်မယ့်မခံခဲ့ရနေဖို့တစ်နေရာရာမှာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့စျေးနှုန်းအဘို့ငါတို့အခန်းသို့လမ်းလျှောက်သောအခါငါအရမ်းအရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါခေတ်သစ်နှင့်သန့်ရှင်းသောကြောင့်ခေတ်ဖြစ်သွားခဲ့ထင်ပေမယ့်ပြန်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ငါအံ့သြခဲ့ !! "
ရှေ့စားပွဲခုံလုပ်သားများအားဖြင့် "Friendly ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း။ သူတို့ကငါအိမ်ပြန်ခဲ့လျှင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုခံစားရစေ၏။ "
"ဒီတည်နေရာကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် !! အသစ်ပြန်ပြုပြင်, ကြီးသောကုတင်, စောင်, ခေါင်းအုံး ... အားလုံးအသစ်က! အဆိုပါအခန်းအကြိုက်ဖက်အလှဆင်ခြင်းနှင့်အလွန်ကြီးမားခဲ့ပါတယ်။ ရေချိုးခန်း squeaky စင်ကြယ်သော, အလွန်တိတ်ဆိတ်အိမ်သာ။ ယာဉ်ရပ်နားအများကြီး။ အလွန်ဆိတ်ငြိမ်ဒေသ။ ကုလားကာအနက်ရောင်ထွက်အမျိုးအစားကြတယ်။ "
အလွန်သန့်ရှင်းတိတ်ဆိတ်။ လူအပေါင်းတို့သည်ဆွဲဆောင်မှု, Disneyland နှင့်သဲသောင်ပြင်နီးစပ်။ မြင့်မားတဲ့တင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်အပေါ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရှာဖွေနေလူတိုင်းဤအရပျဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်မလား။ ကားလ်ငါ့အလိုရှိသမျှလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ထူးချွန်အလုပ်ကိုပြုနှင့်အလွန်စေ့စေ့နားထောင်ခဲ့သည်။ ကျိန်းသေနောက်တဖန်ဤနေရာတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုမည်! မိုက်ခရိုဝေ့နှင့်ရေခဲသေတ္တာနှင့်အတူ Nice remodeled အခန်းပေါင်း။ "
"အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်နေထိုင်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် သင့်ရဲ့ဧညျ့အတော်လေးထူးချွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနီးကပ်ပတျဝနျးကငျြတှငျလိုအပျတဲ့အရာခပ်သိမ်း, စားရန်နေရာများ, Knott ရဲ့ Berry ဟာလယ်ယာနှင့် Disneyland ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလေးတွေရေကန်ကလေးကစားစရာနှင့်အတူကစားမယ့်ပေါက်ကွဲမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြန်ဖွစျလိမျ့မညျ !! "
အထူးယဇ်ဘို့ Facebook ပေါ်မှာ Us Follow
သငျသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဟောလိဝုဒ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်သုံးပွအစ်မပိုင်ရှင်ကို AT ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်ငါးပွင် SERVICE ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ အောက်တွင်နောက်ထပ်လေ့လာရန်နှင့် TODAY သင့်အခန်း Books!
အဆိုပါ Dixie ဟောလိဝုဒ်
11632 သဲသောင်ပြင် Blvd.
Stanton တို့, CA 90680
သတင်းလွှာ Up ကို Sign
Dixie ဟိုတယ်၌© Copyright 2017
Login စေချင်သလား? (ပိတ်ဖို့)